Naya Bikalpa | अमेरिकामा फ्रडहरुबाट हुनसक्ने आर्थिक एवम् मानसिक क्षतिबाट बच्ने तरिका ? - Naya Bikalpa अमेरिकामा फ्रडहरुबाट हुनसक्ने आर्थिक एवम् मानसिक क्षतिबाट बच्ने तरिका ? - Naya Bikalpa
अमेरिकामा फ्रडहरुबाट हुनसक्ने आर्थिक एवम् मानसिक क्षतिबाट बच्ने तरिका ?
प्रकाशित मिती: २०७५ असार २५, ०९: ५३: १७
ईन्टरनल रेभ्युन्यु सर्भिस (आइ आर एस) अर्थात अमेरिकन आन्तरिक कर सेवा कार्यालयको नाममा कर नतिरेको र पटक पटक ताकेता गर्दा समेत अटेरि गरेकाले कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइएको एक महिलाको धम्किपूर्ण म्यासेज आफ्नो सेल फोनमा प्राप्त भ ए पछि झन्डै डेढ हप्ता देखि आतङ्कित र पिरोल्लिरहेका भाइ रबि राउतसँगउनको धेरै पटक मसँगसम्पर्क गर्ने प्रयास पछि हिजो अबेर राति कुराकानि गर्ने मौका मिल्यो ।
त्रासमा रहेछन अमेरिकाको म्यारिल्याण्डमा बस्दैआएका भाइ रबि आइ आर एसको म्यासेजपछि । के गर्ने ? के साच्चै सहि नै हो त यो म्यासेज ? के मलाई कार्वाही गर्न लागेकै हो त ? अब के कहा जाने ? कसलाइ सोध्ने ? अब के कसरि पत्ता लगाउने यो रियल नै हो भन्ने ? मैले के गल्ति गरे त ? काम गर्दै छु । अमेरिकन सरकारलाइ बुझबुझारत गर्नुपर्ने कर तिरि रहेकै छु । बर्षेनि अघिल्लो बर्षको दाखिला गर्नुपर्ने कर नियमित नै छ । कहा, कसरी म बाट गल्ति हुन गयो त ?
यि नै प्रश्न, कौतुहलता, जिज्ञासा र त्रास सहितको प्रस्तुति देखिन्थ्यो भाइ रबिको । मैले सुन्दै ग एँ, उनले भन्दै ग ए । मैले उनलाइ भने मलाइ त्यो म्यासेज कपि गरेर पठाइ देउ, प्रयास गरे उनले तर भ एन पठाउन । मैले उनलाइ भने मेरो फोनमा अर्को नम्बरबाट गरि म्यासेज सुनाउ भने उनले त्यहि गरे । म्यासेज सुने, सुन्दा प्रष्टै थियो त्यो फ्रड र स्क्यामिङ्ग । भाइ रबिलाइ आइ आर एसको नाममा तर्साएर लुट्ने जमर्को थियो । भाइलाइ सान्त्वना दिदै भने न आत्तिनु, त्यो फ्रड आइमाइ हो । यत्ति मात्रै के भनेको थिए दाजु फ्रड नै हो भनेर कसरी थाहा पाउने ? मैले भने उनलाइ दिस इज गुड क्वेसन !
सर्बप्रथम अमेरिकन सरकार र यसका मातहतका फेडरल कार्यालय एबम राज्य सरकार र यसका कार्यालयहरुले कथम कदाचित समःयै परे वा कुनै इस्सु वा कुनै तलमाथि परेकै भ एतापनि ल इनफोर्समेन्ट, प्रहरी र अन्य ततसम्बन्धि इन्क्वाइरी बाहेक सिधै ब्याक्तिलाइ फोनबाट सम्पर्क गर्दैन । चिठि पठाउछ सम्बन्धित ब्याक्तिलाइ उस वा उनको ठेगानामा पहिले पुर्ण बिबरण, कारण र गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया र समाधानको उपाय सहित । सरकारी कार्यालयलाइ तिरनतारनकै सबालमा पनि तिर्नुपर्ने रकम वा तिर्न नपर्ने भ ए के कति कारण सहित खुलाएर वा खुलाउनका निम्ति अप्सन सहित अबसर दिने गर्दछ ।
अपराधका घटना बाहेक अन्य सबालमा अमेरिकन सरकार र यसका मातहतका निकायले धम्क्याउदैनन, शिष्टता र प्रोफेफनल हुने गर्दछन र नागरिकको मर्यादालाइ औधि ख्याल गर्दछन् अमेरिकामा । यदि कथमकदाचित फोन नै गरे पनि अपबादको केसमा फोन गर्ने कर्मचारिको नाम, उस वा उनको परिचय नम्बर र सम्पर्कका लागि स्पष्ट नम्बर जुन नम्बरमा कल गर्दा स्पष्ट अप्सन सहितबाटै पत्ता लगाउन सकिन्छ अर्थात भेउ पाउन सकिन्छ आधिकारिक संस्था वा कर्मचारिले फोन हो भन्ने ।
रबिलाइ भने भाइ त्यो सबै थिएन उक्त कल म्यासेजमा तर तैपनि त्यहाको स्थानिय कर कार्यालयको ठेगाना अनलाइनबाट लिएर त्यहि जाउ र आइ आर एसका कर्मचारिलाइ भेट र कुराकानी गर तर उक्त म्यासेज पनि लैजान चाहि नभुल्नु । उनिहरुले स्पष्टसँगसबै कुरा बताइ दिनेछन तर डराउनु पर्दैन, निर्धक्क सँगबोल्दा र कुराकानि गर्दा हुन्छन । अमेरिकन सरकारि कर्मचारीहरु सहयोगि र शिष्ट हुने गर्दछन । भाइ रबिले थपे थ्याङ्क्यु दाइ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो आज, खुशि लागेर आयो चिन्ताबाट मुक्त भ ए आज दाजुसँग कुरा गरि बुझ्न पाएकोमा । आज चाहि राम्ररि सुत्न पाउने भ एँ । मैले थपे ठिक छ अरु केहि परे भबिश्यमा सम्पर्क गर्नु ।
अमेरिकामा रबि एउटा पात्र मात्र हुन, हजारौ हजार अमेरिकनहरु, अमेरिकामा बस्ने मानिसहरु यस्ता फ्रड, स्क्यामरबाट पिडित हुने गर्दछन दैनिकै जसो । मिलियन मिलियन मानिसहरुले बर्षेनि यस्ता फ्रडहरुको निसानिबाट लाखौ लाख डलर मात्रै गुमाउदैनन, आर्थिक एबम मानसिक सास्ति पनि उत्तिकै । बिभिन्न बहानामा लुट्ने, धम्क्याउने, चीट्ठा र अन्य जिन्सि सामानमा लोभ्याइदिने र लुट्ने, क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड र बैङ्क एकाउण्ट रित्याइदिने र पर्सनल क्रेडीट हिस्ट्रि ड्यामेज नै पारिदिन्छन ।
थाहा नपाउने, नजान्ने, नया र जानकारि नभएका, सिधासादा मानिसहरु, बुढापाका र लोभि मानिसहरु नै यस्ता फ्रड र स्क्यामरहरुको टार्गेट बन्ने गर्दछन अमेरिकामा । एउटा कुरा चाहि के बुझि राख्नु भने फोनमा प्राप्त हुने म्यासेज, इमेलमा प्राप्त हुने म्यासेज र फोन कलमा आफ्ना पर्सनल बैयक्तिक गोप्य इनफरमेसनहरु जस्तै नाम, डेट अफ बर्थ, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर, ठेगाना, बैङ्क एकाउन्ट, क्रेडीट कार्ड एबम डेबिट कार्ड नम्बर र ड्राइभर लाइसेन्स नम्बर कदापि शेयर नगर्नु होला आवश्यक निकाय र बुझि जानि बाहेक ।
भाइ रबिले अर्को पनि महत्वपुर्ण प्रश्न राखे हिजोको फोन कुराकानिमा यो सबैलाइ जानकारी हुँदा काम लाग्न सक्दछ । उनले सोधे त्यो फ्रड आइमाइले कसरि मेरो पर्सनल नाम र सेल फोन प्राप्त गरी ? सामाजिक सन्जाल जस्तै फेसबुक, ट्विटर, याहु, गुगल लगायत इन्फो कलेक्टर यलो पेज, फोन कम्पनिहरुले तपाइका गोप्य सुचना बेचेर कमाउने गर्दछन । यस्ता सुचना किन्नेहरुमा फ्रड, गोप्य संस्थाहरु, अन्डरकभर संस्थाहरु हुने गर्दछन । हाम्रा सुचना र तथ्याङ्कहरु गोप्य छैनन र कुनै पनि बेला तपाइ हामी जो सुकै यस्ता फ्रडहरुको ताकेतामा र निसाना पर्ने गर्दछौ । एउटै कुरा चाहि नभुल्नु सचेत हुनेभन्दा बाहेक अर्को औषधि छैनन यस्ता फ्रडहरुबाट बच्नका लागि ।
२०७५ असार २५, ०९: ५३: १७